Finday avo lenta | December 2019
Ahoana no hanaovana ny fifaninanana amin'ny Instagram
Editor Ny Choice December 14,2019
Tena Finday avo lenta
Notsongadin'ny flagship taloha: finday malaza tamin'ny 2000s
Efa taona maromaro izao, modely smartphones vaovao no nivoaka avy amin'ny tsy fitoviana ara-drariny, ary ny mpamokatra dia niady mafy tamin'ireo mpanjifany. Saingy tamin'ity rehetra ity, lehilahy tsotra iray teny an-dalambe dia tsy nanavaka avy hatrany ny marika sy ny marika tamin'ilay gadget teo an-tanan'ny mpifanolobodirindrina aminy. Saingy teo aloha, teo am-piandohan'ireo taona 2000, ny finday rehetra dia malaza.
Review of the best Android emulators for a computer
Amin'izao fotoana izao, izao tontolo izao dia manana orinasa tena mandroso amin'ny fitaovana finday ary, vokatr'izany, ny fangatahana ho azy ireo, avy amin'ny iraka an-tserasera sy ny rindrambaiko amin'ny birao ho an'ny lalao sy fialamboly. Ny ankamaroan 'ireo programa ireo dia mandeha amin' ny rafitra miasa Android sy iOS. Amin'ity lafiny ity, nanomboka nampivoatra haingana haingana ny mpandrindra ny Android, izay ahafahanao mandefa fampiharana finday ao amin'ny solosainao.
Fiambenana maoderina avy amin'ny Samsung miaraka amin'ny karazan-javatra maro
Ny fiambenana fijerena voalohany dia tsy niasa afa-tsy tamin'ny finday miaraka amin'ny smartphone, fa modely maoderina ho an'ny sehatra fampiharana, manana efijery mamiratra. Ohatra iray tena tsara ny fahitalavitra Samsung Gear S3 Frontier. Ao anatin'ny fonosana iray dia misy karazany maro, fanatanjahan-tena. Ny votoatin'ny fijerena ny modely vaovao Ny fifanakalozam-baovao amin'ny fitaovana hafa sy ireo mari-pamantarana hafa Fanatanjahan-tena amin'ny endrika modely.
https://termotools.com mg.termotools.com © Finday avo lenta 2019